हाल लेखमा, बारे, उदाहरणका लागि, बालिका र महिला, बच्चाहरु संग प्रेरित मलाई लाग्छ: किन । र यसको जवाफ वास्तवमा एकदम स्पष्ट छ: केही मानिसहरू यो उच्च मा. गम्भीर छन्, प्रशंसक महिला छन्, जो विवाह । यी मान्छे छैन, फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ देखि महिला परिवार (वा गर्न चाहनुहुन्छ), कमी को पहुँच र को निषेध गरिएको फल.
केही महिला भनेर विश्वास संग, अब घन्टी मा आफ्नो औंला, तिनीहरूले गुमाउन आकर्षण लागि पुरुष जनसंख्या, तर अक्सर विपरीत हुन्छ । किन केही मान्छे शाब्दिक आत्मसमर्पण गर्न यो अवैध अनुरोध? राम्रो रूपमा, अवैध छैन । यो अवैध छ दृश्य को बिन्दुबाट, को नैतिकता छ । एक हात मा, धेरै दोस्तों हुन चाहनुहुन्छ नैतिक र, तर अर्कोतर्फ हामी धेरै अधिक आनन्द प्राप्त गर्दा हामी पाप । यदि तपाईं मुक्त छन् र सुत्न कसैलाई संग, कि त राम्रो छ, तर अझै पनि ध्यान विदेशी बालिका छन् जो साँच्चै अपरिचित, केही आदर कमी लागि मानिस. मलाई लाग्छ, इमानदार हुन, को लागि देख विवाहित महिला, एक सूचक को अनादर गर्न र गर्न नसक्नुको आफैलाई राख्न केही सीमा छन् । यसबाहेक, तपाईं पुन अन्य मानिसहरू जीवन र विवाह दुई मान्छे । निस्सन्देह, भने त्यो सुरु गर्न आउँदै छ, तपाईं सबै सही, तर अझै पनि, सबै भन्दा राम्रो तरिका राख्न एक राम्रो सम्बन्ध छैन जब दुई मान्छे को बारेमा केही थाहा छैन धोखा, र जब धोखा मा सबै. कुनै पनि मामला मा, कुनै सक्छ बारे मलाई बताउन, तिनीहरूलाई सही । आह हो, एक विवाहित महिला । यो मिठाई, मीठो निषेध गरिएको फल: त वही मुसीबत र अझै धेरै आकर्षक, धेरै मानिसहरू । यदि त्यो थिए, एक पत्नी को एक राम्रो मित्र, एक आकस्मिक जानकारी वा सहयोगी, हामीलाई केही मदत गर्न सक्दैनन् तर हुन आएको एक साहसिक मा एक महिला संग घन्टी मा आफ्नो औंला । हामीलाई केही लागि आकर्षण को एक महिला, एक प्रतिबद्ध सम्बन्ध छ, एक रहस्यमय चुम्बकत्व. सो संग उनको, उनको बनाउन चाहनुहुन्छ, र तपाईं पनि उनको प्रेम मा गिरावट संग आफैलाई यो विचार भरिन्छ यस्तो मान्छे एक अर्थमा को उपलब्द्यि र व्यक्तिगत. तर, मेरो राय मा, यो राम्रो छैन नष्ट गर्न विवाह र प्रयोग गर्न अस्थायी कमजोरी को बालिका स्पर्श गर्न आफ्नो अहम् छ । मेरो सल्लाह: तिनीहरूले भने प्रेमलीला गर्न प्रयास, तपाईं आकर्षित, खोज्न समस्या, बस. को धेरै प्रकार छन् जो विवाहित महिला पक्षमा संग मुक्त दोस्तों छ । यो सौन्दर्य गर्न संभावना छ विवाह गरेका छन् गणना गरेर, छैन जरूरी को लागि धनी मानिस, कहिलेकाहीं तिनीहरूले विवाह गर्न कठिन काम छ कि मान्छे आउन पर्छ. त्यो चाहन्छ स्नेह र स्नेह छ । त्यो हुन सक्छ एकदम धेरै वर्ष छ, तर यो हुन सक्छ लक्जरी सुन्दरता, यद्यपि सायद उनको शरीर हुन सक्दैन भनिन्छ सिद्ध छ । त्यो आक्रमण कुनै ल्याए जो उनको एक ध्यान । अनि सबै किनभने त्यो आवश्यकता, स्नेह र त्यो. तपाईं लाग्छ भने गोली केटी यहाँ तपाईं छन् भने, त्यसपछि तपाईं गलत छ । शायद त्यो पनि प्रेम पर्नु, तर के हामी भन्न सक्छौं, निश्चित लागि: यो महिला हुन्छ तपाईं सबै न्यानो र मीठो एक ट्रेस बिना, र त्यसपछि मा फेंक चिसो अनावश्यक छ । यो लायक छैन छ कुनै पनि सम्बन्ध छ । त्यो वा नरमाइलो गृहिणी कि विवाह बिना कुनै अनुभव, वा एक महिला, छ जो एकदम धेरै काम छ, र उनको पति माथि खुवाउनुभयो. बरु एक छुट्टी लिन वा लिन एक शौक, यो लेडी केटा खोजिरहेको छ एक जूनियर पक्ष । दुर्भाग्यवश, यो एक महत्वपूर्ण छ । भने, पहिलो प्रकार को विवाहित महिला सुपर मूल्य, यो महिला, यसको विपरीत, को लागि प्रतीक्षा गर्न हुनेछ अग्रसर.
बावजुद केही कमी को चासो र पहल, यो महिला पनि राहत
कहिलेकाहीं यो पनि छोटो समय को लागि छोडेर परिवार, तर त्यसपछि सधैं फिर्ता आउँछ । यो केटी छ. यो बिल्कुल गरेको छैन भनेर पहिले नै छ । यो हुन सक्छ वर्ष पुरानो छ । पतिले थियो शायद पहिलो मानिस अनुभवहीन प्राणी हालै फेला कि बाहिर को अन्य पक्ष पनि सेक्स संग अन्य मानिसहरू । त्यो प्रेम, पति, कम से कम त्यो आज्ञाकारी उहाँलाई । तर यो सबै भन्ने तथ्यलाई कारण त्यो एक सभ्य अनुभव को कमी मा प्रेमको मामिला हो । एक सत्र को छद्म मनोविज्ञान, रक्सी को एक बोतल र एक मामूली विश्वास छ कि सेक्स र जनन फरक छन्, र यो आज्ञाकारी केटी नै छ कूद मा आफ्नो ओछ्यानमा र तपाईं पुन दुवै नाङ्गो छ । त्यसपछि तपाईं के गर्न छ यो बाटो: मा यो राखे, यो पुल पति, उनको विश्वस्त बाटो मा भनेर सबै रहनुपर्छ गोप्य र मात्र गर्न सक्छन् अब त्यो बुझ्न कसरी राम्रो यो मा विवाह र कसरी गर्न मा ध्यान पति । गम्भीर, मेरो एक मित्र जवान पत्नीहरू. एकदम अक्सर हामी पूरा यस्तो महिला । त्यो सबै राखे वेदी मा विवाह, त्यो सबै गरे को लागि उनको पति र छोराछोरीलाई । त्यो थियो एक पटक राम्रो तर भएको छ धेरै कम उहाँलाई पछ्याउन. पति त्यो मिल्यो नरमाइलो लाग्यो, उहाँले आफ्नै जीवन संग, उनको त्यो जीवन बाहिर को र किनभने विवाह पवित्र छ । यो महिला कुनै एक प्रेम एक मानिस जस्तै, र यो धेरै निराशाजनक छ ।, गर्न सम्बन्धविच्छेद लागि फाइल, तर त्यो कहिल्यै लिन यस्तो कदम किनभने, यो कदम पनि गम्भीर छ । बरु, त्यो प्रेम खोजिरहेको पक्षमा पाता र उनको मा हतियार को दोस्तों गर्न प्रयास बनाउन आफ्नो नयाँ पुरुष बिना, एक छोडपत्र, को पाठ्यक्रम. सामान्यतया यी मान्छे चाहँदैनन्, एक गम्भीर सम्बन्ध मा एक महिला संग विवाह संग, छोराछोरी र ताजा छैन, छ त उनको नयाँ संघ पनि छ
← डेटिङ मेरो पृष्ठ
सामाजिक नेटवर्क डेटिङ →